Degmada Berdaale waxaa Ka Barakacay 6,000 oo Qoys :- (Sawiro) - Awdinle Online
Degmada Berdaale waxaa Ka Barakacay 6,000 oo Qoys :- (Sawiro)
October 29, 2019 (AO) – Lix kun oo qoys ayaa ka barakacay degmada Bardaale ee gobolka Bay kaddib markii ay magaalada ku soo rogmadeen daadad xooggan oo ka dhashay roobaab mahiigaan ah oo ka da’ay dhanka miyiga, sida uu awdinle.com u sheegey guddoomiyaha degmadaas Maxamed Isxaaq Xasan.
Daadadkan ayaa soo billowday 20-kii bishan October, iyadoo ilaa hadda ay biyaha dhexfadhiyaan xaafadaha magaalada. Bakharradii ganacsiga iyo guriyaha ayay inta badan biyuhu galeen, iyadoo ilaa 240 neef oo ari ahna ay ku dhinteen daadadka.
“Daadadka Bardaale ku soo rugmadey waxay ka yimaadeen dhankaa iyo Shabeelow oo Bardaale u jirta 50 KM, ganacsiyo 80 dukaan ah way ku khasaareen, dhibaato adag baa ka jirta meesha, biyaha biyo la filinayay ma aheyn kedis ayay kusoo galeen marka dhibaatada ma yara,” ayuu yiri guddoomiya.
Qoysaska ka barakacay daadadka ayaa deegaan ku meel gaar ah ka dhigtay bariga magaalada, halkaas oo ah goob taag ah oo ay aysan saameynin ku yeelan daadadka socda. Roobka deyrta ayaa weli ka da’aya degmada iyo deegaannada u dhow.
Magaalada oo ka kooban afar xaafadood oo kala ah Horseed, Waaberi, Oktoobar iyo Axmed Gurey ayaa laga barakacay, laakiin waxay daadadku aad u saameeyeen oo dhammaan dadkii degganaa ay ka barakaceen xaafadaha Waaberi, Axmed gurey iyo Horseed.
Faadumo Macalin Cabdiraxmaan waxay ka mid tahay dadka bannaanka magaalada u barakacay. Waxay daggeneyd xaafadda Horseed, xilli habeen bar ah ayay sheegtay in ay biyaha u soo galeen aqalladii ay ku jireen. Waxay xustay in 20-kii bishan xilli habeen ah uu waaga istaag ugu baryey, iyadoo carruurta qaar dhabarka ku heysa. Waxaana subixii soo badbaadiyay dhallinyarada magaalada oo ka caawiyay inay tagaan taagga.
“Annaga Mundul iyo Baraako ayaan deggeneyn, dhamaan wixii noogu jiray aqallada way mareen biyaha, waxba nooma harin, xitaa 12 digaagado aan dhaqaneyney biyaha ayaa la tagey, taag bannaan ah roobka kugu da’ayo ayaa iska joognaa,” ayay tiri Faadumo, ayadoo intaa ku dartay “Meeshan aan joogno badbaado nololeed ayaan ka soo raadsannay, uma imaan in daad kale noogu yimaado, hadda wax biyo ah ugama jeedno, soo gaari doonaanna ma ogin. Cunto ma helno, laakiin qofkii la arko isagoo wax afkiisa ku jiraan ayaa wax weydiisannaa.”
Fiidey Maxamed Isxaaq iyada iyo qoyskeeda oo siddeed qof ka kooban waxay maalintii tobanaad xaalad nolol xumo ku haysataa duleedka Bardaale.
“Firaash ma heysanno, cunto ma lahan, alaab la qaadey malahan, keliya nafta ayaa la baxsaney, caruurta dhamaan duurka ayaa ku heynaa meel dugsi loo aado malahan,” ayay tiri Fiidey.
Siraaji Yuusuf Sheekh oo ka mid ah ganacsatada raashinka ee bakhaaradooda biyaha galeen ayaa sheegay in ilaa 120 loor oo bariis, bur iyo sokor ah ay ka khasaareen, kuwaas oo uu lacag ahaan ku qiimeeyay afar kun oo doolar.
Previous articleMasuuliyiin ka tirsan DFS Iyo dadweyne Kale ayaa ka qeybgalay Munaasabadda Maalinta Jamhuuriyadda Turkiga:- (Sawiro)
Next articleC/raxmaan C/shakuur oo ka baxay Madasha Xisbiyada Mucaaradka ah